Bogga ugu weyn / blog / Tuubooyinka Musqusha ee Nikkel -ka la Jeexay - Ikhtiyaar Fiican adiga
2021 / 09 / 28 Qoondayntablog 2251 0
Tuubooyinka musqusha waxay ku yimaadaan naqshado, qaabab iyo midabyo badan. Dhab ahaantii, waxaad ka heli kartaa badeecad ku habboon qof kasta oo suuqa jooga. Waxaa jira fursado badan oo ah nooca qasabadda aad rabto inaad ku isticmaasho musqusha, sida birta aan birta lahayn, naxaasta, nikkel la cadayay, iyo dhammaadka chrome. Haddii aad rabto inaad hesho qasabadda ugu fiican gurigaaga, waxaad u baahan tahay inaad qiimayso faa'iidooyinka aad ka hesho qasabadaha kala duwan, sida qasabadaha musqusha nikkel la cadayay.
Helitaanka tubbada musqusha nikkel ee ku habboon gurigaaga dukaanka hagaajinta guriga ee u dhow ayaa waqtigaaga kaa lumin kara. Waxay badanaaba keydiyaan noocyo aad u fudud. Haddii aad rabto inaad aragto noocyada kala duwan ee qasabadaha iyo qalabka musqusha, waxaad gabi ahaanba u baahan tahay inaad gasho internetka. Shabakado kala duwan ayaa ku siin doona badeecadaha ugu qiimaha jaban!
Qiimee xulashooyinka tubbada musqusha
Malaha tubbada ugu caadisan uguna caansan ayaa ah qasabadda birta aan lahayn. Qasabadani waa isku dar ah daawaha birta iyo chromium. Alaabta noocan ah, shaki kuma jiro in birta birta ah ay tahay shay raagaya. Qasabadani waxay leedahay dhowr faa'iidooyin. Waxay noqon karaan qasabadaha ugu jaban, qaabab iyo naqshado badan oo kala duwanna waa la iibsan karaa. Marka la barbar dhigo noocyada kale, isticmaalkooda dhab ahaantii wuxuu leeyahay 3 faa'iidooyin gaar ah. Sababta bilowga ah ayaa ah in la isticmaali karo muddo dheer sababtoo ah ma mirqaamayaan. Qasabadaha noocan oo kale ah way fududahay in la nadiifiyo waxaana lagu waafajin karaa wax kasta oo lagu xardho musqusha.
Ikhtiyaar kale ayaa noqon kara qasabadda chrome-plated. Waxaad ka heli doontaa qasabadaha chrome-plated. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah qasabadaha dahaarka leh ee chrome waa qaali, waxaana laga yaabaa inay qaali yihiin. Ikhtiyaarradaan dahaarka ee chrome guud ahaan ma xumaadaan mana duugoobaan. Way waaraan mana soo saaraan calaamado badan oo muuqda oo gabowga ah. Si kastaba ha ahaatee, mar kasta oo la nadiifiyo qasabadaha noocan ah, dusha kore ee chrome-ka ayaa noqda mid caajis ah.
Qasabadda naxaasta waa doorasho gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inay ku jiraan dhinaca qaaliga ah marka la barbardhigo xulashooyinka kale ee la heli karo maxaa yeelay waxaa jira ikhtiyaarro aad u yar waxaana aad u yar baahida macaamiisha ee qasabadaha noocaas ah. Haddii si aan habboonayn loo shaabadeeyo, qasabadahaasi waxay aad ugu nugul yihiin daxalka. Ikhtiyaaraadkan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay xumeeyaan waxayna u baahan karaan habab nadiifin oo gaar ah.
Marka ay timaado qasabadaha musqusha, qasabadaha nikkel -ka ee la nadiifiyey ayaa loo tixgeliyaa doorashada koowaad. Dhab ahaantii, qasabadda musqusha nikkel waa qasabadda ugu cusub ee suuqa maanta. Maaddaama noocyadan qasabadaha aad loo jecel yahay, waxaad ka heli doontaa xulashooyin badan oo ku saabsan qaabeynta iyo qaabka. Qaababka qaar ayaa si macquul ah loo qiimeyn karaa iyadoo loo eegayo nooca. Badanaa ma xoqaan ama ma muujiyaan faraha. Qasabadahaasi caadiyan ma lumiyaan dhadhankooda waqti ka dib.
Dooro qasabadaha musqusha nikkel ee la cadayay halkii aad ka dooran lahayd tubooyinka kale ee qasabadda
Hadda oo aad fahantay qasabadaha aad kala dooran karto, waxaad awoodi doontaa inaad doorato qasabadda saxda ah ee musqushaada. Maalmahan, dad badani waxay doorbidaan waxyaabo kale oo tuubbooyinka nikkel -ka ah oo aad loo qurxiyay sababtoo ah ma aha oo kaliya kuwo xoog leh oo waara, laakiin waxay sidoo kale siiyaan rafcaan sifeysan musqushaada.
Hore:: Ku Samee Qorshe Qurxinta Musqusha Qubayska Musqulaha
2021 / 09 / 27 2197
2021 / 09 / 24 2297
2021 / 09 / 24 1411